पल, पूजा अनि सुदर्शन कसका लागि कति महत्वपूर्ण छ ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ ? – Nepali Entertainment Site
पल, पूजा अनि सुदर्शन कसका लागि कति महत्वपूर्ण छ ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ ?
in Gossips, Movie News
असार ३० गतेबाट चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ। ट्रेलर र गीत संगीतबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया बटुलेको चलचित्र कस्तो बनेको छ भनेर सवैको चासो बढिरहेको छ। पल शाह र पूजा शर्मा मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्रलाई सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेका छन्। लभस्टोरी चलचित्रमा सफलता हासिल गरेका निर्देशन सुदर्शन थापा, प्रेमगीत चलचित्रबाट चर्चा बटुलेकी पूजा शर्मा तथा नाइँ न भन्नु ल ४ बाट उदाएका अभिनेता पल शाह तीनै जनालाई आफ्नो करियर आगाडी बढाउनको लागि चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ निकै महत्वपूर्ण रहेको छ।
‘थ्री लभर्स’ चलचित्रबाट नेपाली रजतपटमा पाईला टेकेकी पूजाको लिड अभिनेत्रीको रुपमा पहिलो चलचित्र ‘मधुमास’ रहेको थियो। सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको चलचित्रमा पूजाको साथमा अभीनेता आर्यन सिग्देल मुख्य भूमिकामा रहेका थिए। चलचित्र व्यावासायिक हिसावले असफल बनेको थियो।
त्यस्तै पूजाको अर्को चलचित्र ‘अझै पनि’ समेत असफल बनेको थियो। स्व. निर्देशक आलोक नेम्बाङको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रलाई सुदर्शन थापा र पुनम गौतमले निर्माण गरेका थिए। सुदर्शन थापाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘चंखे शंखे पंखे’ मा पनि पूजा शर्मा लिड अभिनेत्रीको रुपमा रहेकी थिइन्। तर व्यावसायिक हिसाबले यो चलचित्र पनि असफल बन्यो।
पूजा शर्मालाई चर्चामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको चलचित्र उनको पछिल्लो रिलिज ‘प्रेमगीत’ नै हो। ०७२ माघमा रिलिज भएको चलचित्रले दर्शकको निकै राम्रो साथ पाएको थियो। चलचित्रको अभिनय सगै पूजा विभिन्न कन्ट्रोभर्सीको कारण चर्चामा रहिन्। यसअर्थमा पूजा शर्मालाई दर्शकले नोटिश गरेको ‘प्रेमगीत’ चलचित्र बाट नै हो। चलचित्र रिलिजको निकै लामो समयपछी उनि पुन पर्दामा आउने तयारीमा रहेको छिन्। यसअर्थमा पनि पूजाको लागी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो करियर अझै बलियो बनाउनको लागि यो चलचित्र निकै महत्वूर्ण रहेको छ।
मोडलिङको दुनियाँ हुदै ‘नाइँ न भन्नु ल ४’ चलचित्रबाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेका पल शाहलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सम्भावना बोकेको अभिनेताको रुपमा हेरिएको छ। म्युजिक भिडियोमा निकै सफल मोडल बनेका पल शाहले पहिलो चलचित्रबाट नै निकै राम्रो चर्चा बटुल्न सफल भए। उनले डेव्यु अभिनेताको रुपमा सोहि चलचित्रबाट केहि अवार्ड समेत हात पार्न सफल भए।
निकै राम्रो फ्यान फलोईङ बनाएका पलको लागि पनि यो चलचित्र निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। यहि चलचित्रको रेस्पोन्स बाट नै उनको रिलिजको तयारीमा रहेको ‘जोनी जेन्टम्यान’ चलचित्रको लागी पनि असार पुग्ने पक्का देखिन्छ। उडाउदै गरेका कलाकार जसले पहिलो चलचित्र नै सफल दिएका छन् उनको लागि सोहि अनुसार चलचित्रमा देखिने अर्को दवाव समेत रहेको छ।
मेरो एउटा साथी छ, के यो माया हो, मेरो लभ स्टोरी, धन्दा, मधुमास, प्रेम गीत लगायतका चलचित्र निर्देशन गरेका सुदर्शन थापाको मेरो एउटा साथी छ र प्रेम गीत मात्रै सफल चलचित्रको रुपमा रहेका छन्। निर्देशकीय हिसाबले उनको पछिल्लो रिलिज चलचित्र ‘प्रेमगीत’ सफल रह्यो। यसअर्थमा पनि निर्देशक थापाको लागी ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ निकै महत्वपूर्ण रहेको छ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो करियरलाई अगाडी बढाउन यी तीनै जनालाई चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ निकै मह्त्व रहेको छ।
गीत संगीत र ट्रेलरबाट पाएको सकारात्मक प्रतिक्रियाबाट चलचित्र सफल हुनेमा निर्माण टिम विश्वस्त रहेको छ। ट्रेलर र गीतमा देखिएको पल र पूजाको केमेष्ट्रबाट पनि चलचित्र हेर्नको लागि दर्शकहरु उत्साहित रहेका छन्। अब चलचित्र कस्तो बनेको छ र यसले यी तीनको करियरलाई कस्तो असर पुर्याउछ, त्यो भने असार ३० पछि नै थाह हुनेछ।
Tags: ma yasto geet gaauchupaul sahapooja sharmasudarshan thapa
फरक भेष फरक समुदायको प्रतिनिधित्व, हेर्नुहोस श्वेताको नयाँ रुप (फोटोफिचर)
अनमोल र भुवनको नाममा सुष्मिता र पूजाको सामजिक संजालमा चर्काचर्की
'डक्टर स्ट्रेन्ज' अभिनेत्री शिल्पा मास्केलाई लिड रोलमा लिदै मिलन चाम्सको 'लिलिबिली'